ज्योतिषशास्त्र अनुसार : बिहीबारको दिन के गर्दा मिल्छ शुभफल हेर्नुहोस्
बिहीबारलाई धा’र्मिक दिन मानिन्छ । ब्रम्हाण्डमा अवस्थित ९ ग्रहको गुरु मानिने वृहस्पतिको दिन मानिने बिहीबार धार्मिक दृष्टिले मह’त्वपूर्ण मानिन्छ
-बिहीबार गरेका धार्मिक कार्य’को फल तत्काल मिल्ने विश्वास गरिन्छ । तर बिहीबार केही काम गर्न भने निषेध गरिएको छ ।१. कपाल नु’हाउनु हूँदैन, २. रौं का’ट्नु हुँदैन, ३. दारी काट्ने वा नङ काट्ने, ४. भारी कप’डा धुनु र फोहोर गर्नु हुँदैन, ५. लक्ष्मीको मात्र पुजा पनि गर्नु राम्रो मा’निदैन ।
बिहीबारको दिन लक्ष्मी नाराय’णको दिन मानिन्छ । यस दिन पुजा गर्दा लक्ष्मीको मात्र गर्नु हुँदैन । पुजा गर्दा लक्ष्मी नारायणको पुजासँगै गर्नु राम्रो हुन्छ । यसले पति पत्निबी’चको सम्बन्ध पनि राम्रो हुने शास्त्र’मा उल्लेख छ